Qoyska Askarigii xabada Koowad ku hubsaday Osama Bin Ladin oo dhuumasho ku jira (WARBIXIN DHEER) – idalenews.com
Qoyska Askarigii xabada Koowad ku hubsaday Osama Bin Ladin oo dhuumasho ku jira (WARBIXIN DHEER)
Mid ka mid ah Mariniskii Maraykanka ee hawlglka ku dilay Hoggaamiyihii Ururka Alqaacida, Osama Bin Ladin ayaa sheegay inay Reerkiisa la soo gudboonaatay cabsi daran.
Wargeyska The Telegraph ee London ka soo baxa ayaa sheegay in Mariniska sheegta inuu isagu furay xabbadihii lagu dilay Bin Ladin ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey inuu labo jeer madaxa ka toogtay Bin Ladin oo lagu dilay Hawlgalkii ay Mariniska Maraykanka bishii May 2-dii ee sannadkii 2011-kii ka fuliyeen magaalladda Abbortabad ee dalka Pakistan.
Askarigaasi oo aan magaciisa la shaacinin, balse ka tirsan Kooxda Mariniska Tabaran ee Seal Team 6 waxa kaloo uu faahfaahiyey cabsida la soo gudboonaatay Qoyskiisa, isagoo xusay inay dhuumaalaysi iyo qoof ku jiraan.
Waxa uu xusay inuu Xaaskiisa iyo carruurtiisa baray sida loo dhuuman karo haddiiba weerar kedis ah lagu soo qaaday.
Askarigaasi waxa uu ku calaacalay inay isaga, xaaskiisa iyo familkiisa noloshooda saamayn ku yeelatay cabsida ka dhalatay dilkii Osama Bin Ladin.
Maydka Hoggaamiyaha Ururka Alqacida ayaan la ogeyn halka lagu aasay, inkastoo ay Dowladda Maraykanka sheegtay inay maydkiisa badda raaciyeen.
Dagaalyahannadda Ururka Alqaacida waxay nidir ku mareen inay u aari-doonaan Hoggaamiyahooda Ruuxiga, iyagoo sheegay inuu Maraykanka ka shallayn doono.
Dowladda Maraykanka waxay Ururka Alqaacida u aqoonsan yihiin Urur Argagixiso oo Caalami ah, iyadoo Ururkaasi sheegtay qaraxyaddii Sept 11, 2001 ee lagu qaaday Daarihii Mataanaha ee magaalladda New York iyo Xarunta Wasaaradda Difaaca ee Washington.
Tartan isboorti oo ay SYAO u furtay Dhalinyarada Magaalada Beledweyne (sawiro)
Wasiirka Warfaafinta Oo Siminaar Usoo Xeray Qaar Ka Mid Howlwadeennada Telefishinka Qaranka (sawirro)